कांग्रेसमा जन्मियो नयाँ गुट, को-को छन् नयाँ गुटमा? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
कांग्रेसमा जन्मियो नयाँ गुट, को-को छन् नयाँ गुटमा?
नवीन्द्रराज जोशी, प्रकाशमान सिंहसहितको अर्को गुटले नेपाली कांग्रेसमा सुद्धीकरण भनेर भेला गर्न थालेको छ । सिंहको निर्देशनमा सोमबार र मंगलबार दुई दिन काठमाडौंमा गोप्य भेला भएका छन् । सिंहको योजनामा भएको भेलामा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा।शशांक कोइराला, डा।रामशरण महतसहितका नेताहरू उपस्थित रहेका थिए । जोशीसहितका नेताहरूको यो गुटले सभापतिबाट शेरबहादुर देउवालाई हटाएर सिंहलाई अगाडि बढाउने योजना बनाएको स्रोतको भनाई छ । भेलामा देउवालाई हटाउने प्रस्ताव नआए पनि देउवाले बनाएको संसदीय समिति र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिबाट राजीनामा दिएर असहयोग गर्ने सम्मको योजना बनेको छ ।
कोइराला परिवार निकट रहेका भण्डारीले गुट परिवर्तन गरेर देउवा गुटमा प्रवेश गरेकाले विश्वास नगरि सिंहको गुटले ‘नो इन्ट्री’ गरेको हो ।गुल्मीबाट नराम्रोसँग पराजित भएका भण्डारीले सभापति देउवाका कारण हार्नुपरेको भनेर हिँडेका छन् । भण्डारीलाई गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मासहितका केही नेताहरूलाई साथ दिएका छन् ।